Aan Kula Guursado - Codka Ubax
Qurbaha ayuu ka yimid. Waa sannadkii 2012-kii, dugsiga sare ayaan ku jirey, da’dayduna aad u ma weynayn. Khasab ayuu isu kay baray. Fasax kooban oo uu dalka ku joogay awgii, durba wuu noqday. Anigu waan ku farxay in uu noqday, mana xiisaynayn isaga iyo xidhiidhkiisa midna. Cadaadis badan ayaa iga soo gaadhayey dhankiisa oo uu rabay in aan sidiisa oo kale u dareemo. Dan ka maan lahayn runtii, xiisena u ma qabin.
Annaga oo aan wada xidhiidhin in muddo ah ayuu noqday. Aniguna Addis ayaan tegay, lambarkaygii uu Facebook-gu iigu xidhnaana waan iska beddelay. Taasi waxa ay keentay in uu waayo meel uu iga la soo xidhiidho. Sidaas ayuu igaga maqnaa 2 sanno.
2014-kii ayay asxaabtaydu ii sameeyeen xaflad dhalasho oo aanan ogeyn. Sawirradii ayaa sidii caadiga ahayd la soo geliyey Facebook-ga. Nin guurdoon ah, shalmadaha wuu arki og yahay. Wuu i soo helay. Inan kale oo sawirrada igu la jirtay ayuu la soo xidhiidhay, xidhiidhkii berigiina uga sheekeeyey. Inantii oo saaxiibadday ahayd ayaa ii sheegtay. Aniguna waxa aan iyada u sheegay in aanay waxba naga dhexayn, berigaana aannu kala hadhnay markiiba. Sidaas oo ay tahay inankii dib ayaannu u wada xidhiidhnay inankii, waxaanu ii sheegay in uu dalka imanayo.
2015-kii bishii siddeedaad ayuu yimid. Markan sidii hore xaaladdu way ka duwanayd. Nin ay ka dhab tahay ayuu u ekaa. Waan soo dhoweeyey xidhiidhkiisa, guur ayaanu ii soo bandhigay. Farxad! Reerka u sheeg, ayuu igu yidhi. Sidii baan yeelay. Ilaa maanta waan ka qoomamoodaa.
Gabadh aannu saaxiib ahayn oo isagana aan is baray ayaa war aan la yaabay ii soo sheegtay. Waan ka rumaysan waayey. Sawirkii ayay ii soo dirtay. Waa tahniyaddii meherkiisa, isaga iyo gabadh kale oo aanan aqoon u lahayn. Dhulka ayaa ila gariiray. Reerkayagii maxaan ku idhaahdaa? Ninkii i soo doonayey, naag kale ayuu mehersanayaa. Aniga ayay hawli ii taallaa. Si kasta oo ay u qadhaadhahay, reerkii ayaan u sheegay in aanay arrintii waxba ka jirin. Jab baan maray.
Maanta waa nin xaas leh oo carruur leh, Ilaahay ha u barakeeyo. Laakiin waxa aan ilaa maanta u qaadan la’ ahay jawaabtii uu i siiyey. Ma aan rabin in aan sidaas kaga hadho. Waxa aan rabay in aan ogaado sababta uu sidaas u yeelay. Isaga oo guur iga rabay in uu gabadh kale doonto. Ma rabo sababta aan u rabay jawaabahaa, waxaan filayaa in aan meel ku qaboojinayey, meel uu isagu gubay. Jawaabtiisii waxay noqotay, ”Waxaan rabay inaan laba dumar ah mar wada guursado.”
Hooyaa I Tidhi Ha Guursan